DEKỌỌ VIDIYO NA DESKTỌỌPỤ NA NVIDIA SHADOWPLAY - WINDOWS - 2019
Dekọọ vidiyo na desktọọpụ na NVIDIA ShadowPlay
Ọ bụghị onye ọ bụla maara na NVIDIA GeForce Experience utility, nke na-eji ndabara ya na ndị ọkwọ ụgbọala vidiyo na-arụ ọrụ, na NVIDIA ShadowPlay (na-egwu egwuregwu, na-ekerịta ihe ngosi), iji mee ka ịdekọ vidio na HD, gbasaa egwuregwu na Intaneti na nke a pụkwara iji ịdekọ ihe na-eme na kọmputa desktọọpụ.
Ọ bụghị ogologo oge gara aga, edere m isiokwu abụọ gbasara isiokwu mmemme, na enyemaka nke ị nwere ike ịdekọ vidio site na ihuenyo ahụ, echere m na ị ga-ede banyere mbipute a, ma e wezụga, na ụfọdụ akụkụ ShadowPlay na-atụle nke ọma na ngwọta ndị ọzọ. N'okpuru ala a enwere vidiyo nke eji usoro a, ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị.
Ọ bụrụ na ịnweghị ọkwa vidiyo akwadobere na NVIDIA GeForce, ma ị na-achọ ihe omume ndị dị otú ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ:
Egwuregwu vidio egwu egwu na-edekọ software
Nbudata desktọọpụ na-edekọ ngwanrọ (maka nkuzi vidiyo na ihe ndị ọzọ)
Banyere nwụnye na ihe achọrọ maka usoro ihe omume ahụ
Mgbe ị wụnye ndị ọkwọ ụgbọala kacha ọhụrụ site na ebe nrụọrụ weebụ NVIDIA, GeForce Experience, na ya, ShadowPlay arụnyere na akpaghị aka.
Ka ọ dị ugbu a, a na-akwado ndekọ ntanetịime maka usoro ihe nkiri ndị na-esonụ (GPUs):
GeForce Titan, GTX 600, GTX 700 (ntụgharị, dịka ọmụmaatụ, na GTX 660 ma ọ bụ 770 ga-arụ ọrụ) na nke ọhụrụ.
GTX 600M (ọ bụghị ihe niile), GTX700M, GTX 800M na ọhụrụ.
Enwerekwa ihe achọrọ maka nhazi na RAM, ma ejiri m n'aka ma ọ bụrụ na ị nwere otu n'ime kaadịadị ndị a, mgbe ahụ kọmpụta gị na-adabara ihe ndị a (ị ga-ahụ ma ọ bụ GeForce Ahụmahụ dabara, site na ịga na ntọala na ịgafe site na ntọala ruo ọgwụgwụ - n'ebe ahụ "Ngarụọrụ, nke ndị kọmputa gị na-akwado, na nke a, ọ dị anyị mkpa ịnwe ihe egwuregwu).
Dekọọ vidiyo site na ihuenyo site na iji Nvidia GeForce Ahụmahụ
Na mbụ, ọrụ nke ịdekọ vidio na desktọọpụ na NVIDIA GeForce Experience kpaliri ihe dị iche iche ShadowPlay. Na nsụgharị ndị na-adịbeghị anya, ọ dịghị ihe dị otú ahụ, Otú ọ dị, echekwawo ihe ngosi ihuenyo ya (ọ bụ ezie na m chere na ọ dịtụghị mfe), ma a na - akpọ ya "Overlay Share", "Egwuregwu Egwuregwu" ma ọ bụ "Egwuregwu Egwuregwu" (n'akụkụ dị iche iche nke GeForce Experience na A na-akpọ ọrụ saịtị NVIDIA dịka iche).
Iji jiri ya, soro usoro ndị a:
Mepee Nvidia GeForce Ahụmahụ (na-emekarị ka ị pịa bọtịnụ nri na Nvidia na ebe ngosi ma mepee ihe omume menu ihe kwekọrọ na ya).
Gaa na ntọala (akara akara). Ọ bụrụ na a gwara gị ka ị debanye aha tupu ị jiri GeForce Experience, ị ga-eme nke a (ọ dịghị mkpa tupu oge a).
Na ntọala, gbanwee oghere "In-Game Overlay" - ọ bụ onye nwere ikike ịkwasa na idekọ vidiyo site na ihuenyo, gụnyere site na desktọọpụ.
Mgbe i mechara usoro ndị a, ị nwere ike ịdekọ vidiyo na egwuregwu (ndekọ ndekọ desktọọpụ site na ndabara, ma ị nwere ike gbanwee ya) site na ịpị igodo Alt F9 iji malite ndekọ ma ọ bụ site na ịpị igodo egwuregwu site na ịpị igodo Alt Z, ma ana m akwado ka ị nyochaa ntọala ịmalite .
Mgbe ịmechara nhọrọ "Na-egwu Egwuregwu", ntọala nke ndekọ na ọrụ mgbasaozi ga-adị. N'etiti ndị kasị amasị ma na-aba uru nke ha:
Ụzọ mkpirisi (malite na ịkwụsị ndekọ, chekwaa vidiyo vidiyo ikpeazụ, gosipụta mpaghara nchịkọta, ọ bụrụ na ịchọrọ otu).
Nzuzo - na nke a i nwere ike ime ka ike ịdekọ vidiyo site na desktọọpụ.
Site na ịpị igodo Alt Z, ị na-akpọ mpaghara nchịkọta akụkọ, nke nwere ntọala ndị ọzọ dị, dị ka àgwà vidiyo, ntanetị egwu, foto weebụ kamera.
Iji dozie àgwà ndekọ, pịa "Dekọọ", wee - "Ntọala".
Iji mee ka ndekọ site na igwe okwu, ụda site na kọmpụta ma ọ bụ gbanyụọ ndekọ ọdịyo, pịa igwe okwu n'akụkụ aka nri nke panel ahụ, n'otu aka ahụ, pịa akara ngosi weebụ iji gbanyụọ ma ọ bụ mee ka vidiyo vidiyo na ya.
Mgbe emechara ntọala niile, jiri naanị hotkeys malite ma kwụsị ịdekọ vidiyo site na Windows desktọọpụ ma ọ bụ site na egwuregwu. Site na ndabara, a ga-echekwa ha na nchekwa "Video" (video site na desktọọpụ - na folda Desktọpụ).
Rịba ama: M n'onwe m jiri ọrụ NVIDIA na-edekọ vidiyo m. Achọpụtara m na mgbe ụfọdụ (na na mbụ na nke ọhụrụ nsụgharị) enwere nsogbu na ndekọ, karịsịa, ọ nweghị ụda n'ime vidio ahụ edere (ma ọ bụ edekọ ya na ntụgharị). N'okwu a, ọ na-enyere aka gbanyụọ njirimara "In-Game Overlay", wee weghachite ya.
Iji ShadowPlay na Uru Mmemme
Rịba ama: Ihe niile edere n'okpuru ebe a na-ezo aka na mmejuputa mmemme nke ShadowPlay ọrụ na NVIDIA GeForce Experience.
Iji hazie wee malite ndekọ site na iji ShadowPlay, gaa na NVIDIA GeForce Experience ma pịa bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
Iji mgba ọkụ na aka ekpe, ị nwere ike ịme ma gbanyụọ ShadowPlay, na ntọala ndị a dị:
Ọnọdụ - ndabara bụ ndabere, nke pụtara na mgbe ị na-egwu egwu ahụ nọgidere na-enwe ma mgbe ị pịa igodo (Alt F10) a ga-echekwa minit ise ikpeazụ nke ndekọ a na kọmputa (a ga-ahazi oge na paragraf "Oge ndekọ oge"), ya bụ, ọ bụrụ na ihe na-akpali mmasị na-eme na egwuregwu, ị nwere ike ịchekwa ya mgbe niile. Ntuziaka - ederede na-arụ ọrụ site na ịpị Alt F9 na oge ọ bụla nwere ike ịnọgide na - site na ịpị igodo ugboro ugboro, a na-echekwa faịlụ vidiyo. Enwere ike ikwusa na Twitch.tv, Amaghị m ma ọ bụrụ na ha ejiri ya (Adịghị m onye ọkpụkpọ).
Ogo - ndabara dị elu, ọ bụ 60 okpokolo agba kwa nkeji na ọnụọgụ nke 50 megabits kwa nkeji na iji koodu H.264 (nyocha ihuenyo). Ị nwere ike iji aka gị dozie àgwà ederede site na ịkọ ihe chọrọ bitrate na FPS.
Soundtrack - Ị nwere ike idekọ ụda site na egwuregwu, ụda sitere na igwe okwu, ma ọ bụ abụọ (ma ọ bụ ịnwere ike gbanyụọ ndekọ ụda).
Ntọala ndị ọzọ dị site na ịpị bọtịnụ ntọala (na njedebe) na ShadowPlay ma ọ bụ na "Ntọala" taabụ Ahụmahụ GeForce. N'ebe a, anyị nwere ike:
Kwe ka ndekọ desktọọpụ, ọ bụghị naanị vidiyo site na egwuregwu ahụ
Gbanwee igwe okwu okwu (na mgbe niile ma ọ bụ na-aga n'ihu)
Ebe dochie anya na ihuenyo - kamera, nkwụsị ọnụ kwa nkeji FPS, ndekọ ọnọdụ egosi.
Gbanwee nchekwa iji chekwaa vidiyo na faịlụ nwa oge.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ihe nile dị kpamkpam, ọ gaghị eme ka nsogbu ọ bụla nwee nsogbu. Site na ndabara, a na-echekwa ihe niile gaa n'ọbá akwụkwọ "Video" na Windows.
Ugbu a gbasara uru nke ShadowPlay maka ịdekọ egwuregwu vidio tụnyere ihe ngwọta ndị ọzọ:
Ihe niile enwere n'efu maka ndị nwe nke kaadị vidiyo akwado.
Maka ndekọ vidiyo ma gbanwee, a na-eji kaadị eserese nke kaadị vidiyo (na, ma eleghị anya, ebe nchekwa ya), ya bụ, ọ bụghị usoro nhazi nke kọmputa. Na tiozi, nke a nwere ike ibute enweghị mmetụta nke vidiyo na FPS na egwuregwu (mgbe niile, anyị adịghị emetụ ihe nhazi ahụ na RAM), ma ọ bụ ma eleghị anya vice versa (mgbe niile, anyị na-ewe ụfọdụ n'ime iheadị vidiyo) - ebe a ka anyị nwalee: Enwere m otu FPS na ndekọ vidiyo nke na-apụ. Ọ bụ ezie na ịdekọ desktọọpụ vidiyo a nhọrọ ga-adị irè.
Ndekọ nkwado na mkpebi 2560 × 1440, 2560 × 1600
Nkwenye nke ihe ndekọ vidio site na desktọọpụ
Ndekọ ahụ na-apụta n'onwe ha na vidiyo dị n'okpuru ebe a. Na mbu, e nwere ọtụtụ ihe ị na-ekwu (ọ bara uru ịtụle na ShadowPlay ka dị na BETA version):
Ntụle FPS, nke m na-ahụ mgbe ọ na-edekọ, adịghị edekọ na vidiyo (ọ bụ ezie na o yiri ka edere ya na nkọwa nke mmelite ikpeazụ ọ kwesịrị).
Mgbe ị na-edekọ site na desktọọpụ, ekwughị okwu okwu ahụ, ọ bụ ezie na na nhọrọ a na-edozi ya na "Mgbe niile", yana na ngwa ntanetị Windows na-edebe ya.
Enweghị nsogbu na ogo ndekọ, ihe niile edere dị ka mkpa, malitere na hotkeys.
N'oge ụfọdụ, atọ FPS na-atụgharị na Okwu na mberede pụtara n'otu oge, ebe m dere isiokwu a, akwụsịghị ruo mgbe m gbanyụrụ ShadowPlay (Beta?).
Ọfọn, ndị ọzọ dị na vidio.